नयाँ सम्झौताले चीन-अमेरिका ‘व्यापार युद्ध’ समाप्त हाेला ?- विश्व - कान्तिपुर समाचार
नयाँ सम्झौताले चीन-अमेरिका ‘व्यापार युद्ध’ समाप्त हाेला ?
माघ २, २०७६ एजेन्सी
वासिङ्टन — लामो समयदेखि चलेको ‘व्यापार युद्ध’ कम गर्न चीन र अमेरिकाले एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । दुई देशबीच चलेको व्यापार युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमै असर परेको थियो ।
मंगलबार भएको सम्झौतापछि वासिङ्टन र बेइजिङबीचको व्यापार युद्ध कम हुने विश्वास गरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनसँगको नयाँ व्यापार सम्झौताले अमेरिकी अर्थव्यवस्थामा सुधार आउने बताएका छन् । त्यस्तै चीनले पनि यो सम्झौताले दुई देशबीचको सम्बन्धमा सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
सम्झौतामा के–के छ ?
चीनले सन् २०१७ को तुलनामा अमेरिकी आयात कम्तीमा पनि २ सय बिलियन डलर पुर्‌याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसका लागि चीनले कृषिमा ३२ बिलियन, उत्पादनमा ७८ बिलियन, ऊर्जामा ५४ बिलियन डलर र आयात र सेवा क्षेत्रमा ३८ बिलियन डलरको आयात गर्ने सम्झौता गरेकाे छ ।
चिनियाँ उत्पादनमा लगाउँदै आएको भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशबाट घटाएर २५ प्रतिशत बनाउन अमेरिका सहमत भएको छ ।
त्यस्तै चीनले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन अझै बलियो बनाउने पनि बताएको छ । यसले बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गर्ने कम्पनीमाथि कारबाही गर्न अझ सहज हुन्छ । चीन र अमेरिकाका कम्पनीबीच बेलाबेलामा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार उल्लंघन गरेको आरोपप्रत्यारोप भइरहेको थियो ।
सम्झौतामा अमेरिकाका तर्फबाट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चीनका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री लियो खेले हस्ताक्षर गरेका थिए । अमेरिका र चीनबीच नयाँ व्यापार सम्झौता भए पनि यसले दुई देशले एकअर्काको सामान आयातमा लगाएका अतिरिक्त कर हटाउने विषयमा भने कुनै सम्बोधन गरेको छैन ।
चीन-अमेरिका व्यापार सम्झाैताकाे पूर्ण पाठ
प्रकाशित : माघ २, २०७६ १३:३१
माघ २, २०७६ लालप्रसाद शर्मा
पोखरा — पोखराको मनिपाल शिक्षण अस्पतालमा बिहीबार चम्ल्याहा शिशुको जन्म भएको छ । स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका–१ की २६ वर्षीया सुनीता पौडेल प्रधानले ३ छोरी र १ छोरालाई जन्म दिएकी हुन् । चारैजना शिशु र आमाको स्वास्थ्य ठीक रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
तस्बिर सौजन्य– खीम लामिछाने काजी
डा. महेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा शल्यक्रियामार्फत चार बच्चाको जन्म दिइएको हो । डा. पाण्डेका अनुसार पहिलो बच्चा छोरी डेढ केजीकीलाई ९ बजेर ४९ मिनेटमा निकालिएको थियो । त्यसपछि दोस्रो बच्चा छोरा (१.३ केजी), तेस्रो र चौथो बच्चा छोरीहरु (१.३ र १.४ केजीका) लाई ९ बजेर ५० मिनेटमा निकालिएको हो ।
पाण्डे नेतृत्वमा ७ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको पहलमा करिब ४० मिनेट लगाएर शल्यक्रियामार्फत बच्चाको जन्म गराइएको हो । ‘भिडियो एक्सरे गर्दा तीनवटा बच्चामात्रै देखिएको थियो’ पाण्डेले भने, ‘तर शल्यक्रिया गर्दा चारवटा भेटिए ।’ पाण्डेका अनुसार प्रति ८ लाखमा एकजनाले चम्ल्याहा जन्माउने गर्छन् ।
सुनीताको यो दोस्रो गर्भ थियो । ३४ साता ४ दिनमा उनले चार सन्तान जन्माएकी हुन् । उनको ५ वर्षीय एक छोरा छन् । गत आइतबार उनी प्रसूतिका लागि मनिपाल भर्ना भएकी थिइन् ।
प्रकाशित : माघ २, २०७६ १३:२५